Manni murtii Federaalaa dhaddachi 15ffaan obbo Melakuu Faantaa seera gumurkii fooyyeffameen murtiin akka kennamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhabsiisuu dhaan kana dura akka himannaa abbaan alangaa komiishina naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa dhiyeesseen akka itti fufu murteessee jira.
Manni murtichaa murtii kanaaf bu’uura kan godhate gumiin heera waa’ee heeraa qoratu labsiin gumurkii fooyyeffameef kana duraa wal hin fallessan jechuu isaa ibsee himatamtoota kan fayyadu akkasumaan yoo falmatan ta’uu beeksiseera.
Akka seera gumurukii isa duraatti konkolaattotaa fi meeshaalee kanneen biroo dilaalaan ala seenan qaama sadaffaatti dabarsuun ykn dhimma fayyadamuun ta’uun alatti yoo itti gargaaraman yakkaan nama gaafachiisa kan jedhu si’a ta’u himannaan sunis akkuma Kanaan dhiyaate.
Seerri gumurkii inni haaraan garuu seera kana yakka irraa gara seera sivilii-tti jijjiiree jira.
Iyyannaa obbo Melaakuu Faantaa, obbo G/Wahid G/Giyoorgis, obbo Belachew Beyene, obbo Neggaa G/Igzaber, obbo Ketema Kebede, obbo Simaachoo Kebedee fi Dr. Fiqruu Maaruu dhiyeeffatan seera gumurukii isa haaraan akka ilaalamuuf yoo ta’u kunis heera keeyata 22 her keeyata 2 irratti akka taa’ee jirutti ta’uun beekamaa dha.
Manni murtichaa murtii kenneenis Kanaan booda ragaaleen abaa alangaa akka yeroo kaa’ameetti torbanitti guyyaa sadii jechuunis roobii fi jimaata dhiyaatu.
Abbootiin dhimmaas guutummaa yeroo lafa kaa’amee waajjira mana murtichaatii argachuu kan danda’an ta’uun ibsameera. Kibxtataa fi Kamisa manni murtichaa iyyata adda addaa kan dhaggeeffatuu fi murtii kennu ta’uu beeksiseera.